Nanmalgyi - Page 855 of 938 - News & Entertainment
ယခုနှစ်ချန်ပီယံလိဂ်မှာ ပွဲတိုင်းဂိုးသွင်းထားတဲ့ ခရစ္စတီယာနိုရော်နယ်ဒို
March 7, 2018 Yuki 0
ရီးရဲမက်ဒရစ် အသင်းရဲ့ တိုက်စစ်မှူး ခရစ္စတီယာနို ရော်နယ်ဒိုဟာ ယနေ့နံနက် အစောပိုင်းက ကစားခဲ့တဲ့ ပီအက်စ်ဂျီနဲ့ပွဲမှာ သွင်းဂိုး၁ဂိုးသွင်းယူ နိုင်ခဲ့တာကြောင့် ယခုနှစ်ချန်ပီယံလိဂ်မှာ ပွဲတိုင်းဂိုးသွင်းထားနိုင်တဲ့ ကစားသမားအဖြစ် မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့သလို ချန်ပီယံလိဂ် သမိုင်းတစ်လျှောက်မှာလဲ အဆိုပါမှတ်တမ်းကို ပိုင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့ တစ်ဦးတည်းသော ကစားသမား ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ ရော်နယ်ဒိုဟာ အုပ်စုပွဲစဉ်၆ပွဲလုံး ဂိုးသွင်းနိုင်ခဲ့ပြီး […]
“သွား” ကလည်း ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ အဓိကကျတဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တာကြောင့် အထူးဂရုစိုက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ၁။ ပီကေဝါးခြင်း တကယ်တော့ အချိုဓာတ်လျော့နည်းတဲ့ ပီကေ ကိုဝါးခြင်းဟာ သင့်သွားများ ယိုယွင်းမှု ကိုတားဆီးပေးနိုင်ပါတယ်။ ပီကေ ဝါးခြင်းဟာ သွားကြို သွားကြား အတွင်းမှာရှိတဲ့ စားကြွင်းစားကျန်တွေကိုရှင်းထုတ်ပေးနိုင်တာကြောင့် သွားပိုးစားခြင်း ကိုလည်းကာကွယ်ပေးပါတယ်။ ၂။ သွားပွတ်တံ ကို […]
ရုပ်ဆိုးတဲ့ ချစ်သူ ကောင်လေးကို ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ် ချပြခဲ့လို့ ဝေဖန်ခံခဲ့ရတဲ့ ကောင်မလေး
ကမ္ဘောဒီးယားမှ လှပတဲ့ မိန်ကလေးဟာ ရုပ်ဆိုးတဲ့ ချစ်သူ ကောင်လေးနဲ့ တွဲရိုက်ထားတဲ့ ပုံတွေကို ဆိုရှယ်မီဒီယာ ပေါ်တင်ခဲ့ပါတယ်။ သူမပုံတွေကို စိတ်ဝင်စားသူများပြီးဝေဖန်မှုတွေလည်း ရှိပါတယ်။ သူမလို လှပတဲ့ မိန်းမလေး တစ်ယောက်အနေနဲ့ ရုပ်ဆိုးလွန်းတဲ့ ကောင်လေးကို ချစ်ရတဲ့ အကြောင်းကို ဝေဖန်နေကြပါတယ်။ မိန်ကလေး အနေနဲ့ကတော့ ခုလို […]
လူတော်တော်များများ သတိမထားမိတဲ့ အပါယ်​ကျ​စေ​သောအလှူ ၁၀ မျိုး
❄အပါယ်​ကျ​စေ​သောအလှူ ၁၀ မျိုး❄ ၁။ သမဇ္ဇဒါန-ကချေအလှူ ( အငြိမ့်ဇာတ်ပွဲ )။ ၂။ မဇ္ဇဒါန -သေရည်သေရက်အလှူ။ ၃။ ဣတ္ထိဒါန – မိန်းမအလှူ။ ၄။ ဥသဘဒါန -နွားလား၊ မြင်းလား အလှူ။ ၅။ စိတ္တကမ္မဒါန – ကာမဂုဏ်ကို နိုးကြွစေသော […]
အံ့သြစရာကောင်းလောက်အကြံကောင်းတဲ့ ပျား ကျွန်တော်ကျိုင်းတုံ မြို့ကိုအလည်သွားရင်းနဲ့ ညပိုင်းမှာရပ်တော်မူဘုရားဆင်းတုတော်ကြီး သွားဖူးရင်း ဆင်းတုတော်ကြီးမှာ စွဲနေတဲ့ ပျားအုံတအုံကို တွေ့လိုက်ပါတယ်.. အဲ့ပျားအုံကိုတွေ့ပြီး စိတ်ထဲမှာ အတွေးတွေ တစီတန်းကြီးပေါ်လာပါတယ်.. ဟာာ..ဘုရားဆင်းတုတော်မှာ ပျားစွဲတာ ဘာထူးဆန်းလို့လည်းဗျာ..လို့ ပြောရင်လည်း ပြောနိုင်ပါတယ်.. ဘုရားဆင်းတုတော် ပျားစွဲတာကို တွေ့ပြီး တွေးမိတာကတော့..ဘုရားဆင်းတုတော်မှာ ပျားစွဲတာမြင်ရလို့ လဒ်ပွင့်မှာတို့ […]
ယောက်ျားထုကြီးကို မကြီးစိုး ၀ုန်းလိုက်ဘီ…
ယောက်ျားတွေက ပြောတယ် …မင်းတို့မိန်းမတွေက ငွေမက်တယ်တဲ့ .. ဟုတ်တယ်လေ …။အဲဒီ ငွေမရှိဘဲ ကျောတစ်ခင်းစာ နေရာ ရနိုင်ပါသလား ?အဲဒီ ငွေမရှိဘဲ လူကြားထဲ ၀င်ဆန့်လို့ ရသလား ? ရှင်တို့လည်း သူတောင်းစားကိုတော့ ရည်စားတော်ချင်မှာ မဟုတ်ဘူး …။မိန်းမအဖြစ် ယူချင်မှာ […]
မေ့လျော့ခံ မြန်မာစစ်သူကြီးတစ်ဦး. အပိုင်း(၁) မြန်မာ့သမိုင်းကြောင်းမှာ စစ်ပွဲများစွာကို အောင်နိုင်ခဲ့ကြတဲ့စစ်ဘုရင်တွေကို ပြောပြပါဆိုရင် ပြောပြနိုင်တဲ့သူတွေ အတော်များများ ရှိကြပါတယ် ။ အနော်ရထာက စလို့ကျန်စစ်သား ၊ တပင်ရွှေထီး ၊ ဘုရင့်နောင် ၊ အနောက်ဘက်လွန်မင်း ၊ အလောင်းမင်းတရား ၊ ဆင်ဖြူရှင် စတဲ့ စစ်ဘုရင်တွေအကြောင်း […]
ဖျာပုံသူ ဖျာပုံသား များ နှင့် မြန်မာ တစ်ပြည်လုံးမှာရှိတဲ့ ဖူးချိန်တန် ဖူးထိုက်လို့. ဖူးမျှော်ခွင့်ရလို့ ထင်ပါပြီ။ကျွန်တော်ကလေးဘဝတည်း က ဘိုးဘိုး ၊ဘွားဘွား၊ဘိုဘေး အစဉ်အဆက်ကတည်း က ဖျာပုံမှာ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရား အံ့တော် နှင့် ဆံတော်တစ် ဆူ ကိမ်းဝပ်နေတယ် လို့ သိခဲ့ရပါတယ်။ သမိုင်းအစဉ် […]
Facebook တည်ထောင်သူ မတ်ဇူကာဘတ်ရဲ့အားနည်းချက်
Facebook တည်ထောင်သူ Mark ကိုတော့ အားလုံးသိကြမယ်ထင်ပါတယ်။ သူဟာ ငယ်ရွယ်စဉ်ထဲက ထက်မြက်ခဲ့ပါတယ်။ အသက် (၁၀) နှစ်အရွယ်မှာတင် သူ့အဖေရဲ့ ကွန်ပျူတာကို ကျွမ်းကျင်စွာကိုင်တတ်နေပြီး (၁၃) နှစ်မှာတော့ ကွန်ပျူတာ ပရိုဂရမ်တစ်ခုကိုတောင် ရေးဆွဲနိုင်နေပါပြီ။ ဟားဗတ်သို့တတ်ရောက်ချိန်မှာတော့ Facebook ကို တီထွင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ Facebook ဟာ […]
« 1 … 854 855 856 … 938 »